Ibsa Ejjannoo Waligayii Hatattamaa Miseensota TBOJ | Fighting for Freedom and Equality
Posted by Gishe Abdi Wako on June 25, 2013
June 25, 2013 at 9:10 am · Gadaa.com
Miseensotni Tokkummaa Barattoota Oromoo Jarmanii (TBOJ) kan nannoo Würzburg, Nürnberg fi München jiraatan Waxabajjii 22 bara 2013 saatii 14:00 irraa egalee amma saatii 19:00 magaalaa Nürenberg kessatti waligayii hatattamaa geggefataniru. Kaayyoon waligayii kanaa: 1ffaa haala qabsoo bilisummaa Oromoo (QBO) yeroo ammaa irratti mariyatuun hubannoo siyasaa argatuu fi 2ffaan seera ca’aa ABO irratti mariyachu ture.
Walgahiin kun haasa semannaa J/Gammachuu Fayisaa, bakka bu’aa koree hojii geggesituu (KHG) TBOJ, fi faaruu alaabaa Oromiyaan ergee banameen booda Miseensi Gumii Sabaa Adda Bilisummaa Oromoo (MGS-ABO), J. Dr. Shugux Galataa senaa tokkummaa barattoota Oromoo Awuropaa (TBOA) wajjin waliitti qabsisuun haala QBO irratti xinxala waligalaa hirmaatota waligayii kanaaf diyeesan. Itti aansuun karaa J. Malkamuu Jaatee (miseensa koree hojii qindeesitu kutaa ABO Giddu-galessa Awuropaa) sirnoota bulmataa TBOA fi TBOJ irratti ibsi kennamera. Mata duree lamaanuu irratti erga ibsii kennameen booda hirmaattooti walgayiicha gaaffiilee fi yaada ijaaroo dhiheessuun marii bal`aa geggefamee irratti hunda‘uun ibsa ejjannoo baafachun sagantaan waligayii kanaa milkiin xumurameera.
Nuti miseensotiin TBOJ walgayii kana irratti hirmaannee haala siyaasaa QBO yeroo ammaa fi seera bulmataa TBOJ irratti ergii mariyanneen booda, ummata Oromoo fi Oromiyaa sirna gabiromfannaa (kolonii) bara ammaa motummaa Habashaa, gartuu wayaaneen (TPLFn) hogganamaa jiru, jalatti gidirfamaa jiru bilisomsuuf qabsoo hadhooftuu hogganummaa jaarmaa ABOn geggefamaa jiru gutummaan tumsaa, akka ca’aa dhaabichaatti gumaata wan nu irraa barbaadamu gama maraan kennuuf qophii ta`uu kenya ni mirkaneesina.
3. Qabsoo fincila diddaa gabirummaa karaa qerroo Oromiyaa, barattotaa, fi ummata Oromoo geggefamaa jiru waan nu irraa barbaachisu maraan ni tumsina!
5. Yakkoota dhittaa mirga-namomaa rogaalee danuun ummata Oromoo irratti karaa motummaa gabironfataa TPLF raawatamaa jiru ni balaaleffanna.
6. Ummata Oromoo biyya irraa ariyatuun qabenyaa fi lafa Oromiyaa samuu fi saamsisuu motummaa TPLF ni balaalleffanaa.
7. Ummata Oromoo fi qabenyaa Oromiyaa irratti yakkoota motummaan TPLF raawataa jiru hambisuuf akka hawaasoti Adunyaa nuuf dirmatan ni gaafanna.
Hirmaattota waligayii hatattamaa TBOJ
Jarmanii (NürenBerg); Waxabajjii 22 bara 2013
← World Refugee Day 2013 – How Oromo Refugees Marked the Day Across the Globe
OPride Person(s) of the Year 2012: Oromo Political Prisoners →